मंसिर १४ गते, २०७७ आइतवार
29th November, 2020 Sun १८:३४:४२ मा प्रकाशित
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यस्तै ल्याङ्ग ल्याङ्गमा अब धेरै दिन रहिरहनु घातक हुनेछ । मिटिङ पछी मिटिङ फेरी बस्ने मिटिङ अर्को मिटिङ प्रश्नको लागि मिटिङ उत्तरको मिटिङ यि सब सुनेर आम जनता पनि वाक्क दिक्क भैसकेका छन । कार्यकर्ता समर्थक स्थरमा पनि झ्याउ लागिसकेको छ । यो मिटिङ नै मिटिङको गोलचक्कर तोड्न नसके परिस्थिती देशकै लागि प्रतिकुल बन्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
केपी ओली भस्मासुर प्रवृति हो । आफु भलो त जगत भलो । मेरो भलो हुँदैन भने कसैको भलो हुनदिन्न । केपी ओलीले गर्न खोजेको र देखिएको यही हो । आफुले जे जे गरे पनि कसैले रोकतोक गर्न मिल्दैन मै सर्वेसर्वा हुँ अरु सब फोकटलाल हुन भन्ने नै केपीको अस्लियत दिनको घाम झै प्रस्ट देखीइसकेको छ । पार्टी, संगठन, बिधी, बिचार, बहस, बिकास, निकास यी कुनै सँग उनको दुर दुर सम्मको साईनो छैन । उनलाई यी केही चहिदैन पनि । सुर्जे थापा, गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, इश्वर पोखरेल लगाएत् जो टाढा टाढा सम्म कुहिएको सिनो भन्दा बढी गन्हाईरहेका छन, यिनै ओलीका प्यारा अनी सहरा हुन । अरु बिधी बिधान वर्गका कुरा गर्नेहरु सब गयल भैस पानीमे हुन । भित्र अत्यन्तै कालो बोकेको, छलछाम तिक्डमको पोकोले भरिएको, भ्रस्ट मती बोकेको तर काइते तर्क र बठ्याइ गर्ने सिपले गर्दा मै खतरा नेता हुँ भन्ने भ्रम फिजाएर दुनियाँको दिमाग भुट्न सक्ने हुनु नै ओलीको खास चरित्र हो । ओली कम्युनिस्ट समन्युस्ट् केही होइन पनि । भित्र भित्र सामन्ती शोषकी आत्मा भएको तर लहै लहैमा लागेर बिना सुझबुझ बिना कुनै उदेश्य मान्छेको टाउको गिड्दै हिड्दा १४ वर्ष जेलको हावा खान पुग्नु नै ओलीको योगदान हो पहिचान हो ।
पार्टी एकता ओलीको सत्तामा पुग्ने भर्र्याङ् मात्र हो । जुन बिभिन्न घटनाक्रमले पुस्टि गरिसकेको छ । यो एकता प्रती उनलाई न कुनै सम्मान छ न माया । सत्तामा पुग्नु थियो पुग्यो, अब कुनै आवश्यक छैन । सत्तामै संकट आयो भने बरु काङ्रेससँग मिल्छु तिमीहरुलाई देखाइदिन्छु । तिमीहरुका यस्ता बहुमत सहुमत मेरालागि तुच्छ हो । तिमीहरुलाई मान्दा पनि मान्दिन गन्दा पनि गन्दिन भनेर प्रस्टसँग ओलीले देखाइसकेका पनि छन । राजनीतिक भाषा, राजनीतिक प्रशिक्षकको गुन, सालीनता, भद्रता शिस्टता जस्ता कुराको उनमा बिउ पनि छैन । खाली उखान टुक्का छोडेर गलल लोक हसाउने, जतिबेला जे बोलेर ‘हिरो’ बनिन्छ त्यही बोल्दिने, आफु राम्रो भएर होइन अर्काको बद्ख्वाइ गरेर फेमस् बन्ने - हो यत्ती हो ओलीले जानेको । ओली न राष्ट्रवादी हो न हल्ला गरिए जस्तो बिकास प्रेमी । यि त सब मौसमी राग हुन । होइन भने आज डाँडा डाँडामा रेल, खोला खोलामा पानी जहाज अनी भान्सा भान्सामा ग्यासको पाइप हुन्थ्यो । नसकिने कुरो बोलिदैन थियो । कुलमानहरु इनाम पाउँथे गोकुल बास्कोटाहरु जेल जान्थे ।
केपी ओलीको अहिले पार्टी नफुटाइ हाल्ने बरु लखारलुखुर गोलमटोल् उत्तर लेखेर चुनाव सम्म प्रधानमन्त्री रहिरहने उद्देश्य छ । त्यती बेला सम्म अकुत सम्पत्ती बटुल्ने र ठीक चुनाव को मिती घोषणा गर्ने बित्तिकै भर्खरै दर्ता गरेको एमाले पार्टी नै ब्युँताउने र एमालेकै नाममा सुर्य नै चुनाव चिन्ह राखेर चुनाव लड्ने । अहिले भ्रस्टाचार गरेर जम्मा गरेको पैसा चुनावमा गाउँ गाउँ टोल टोल सम्म बाड्ने अनी आँफै चुनावी प्रधानमन्त्री रही सर्लक्कै चुनाव जित्ने नै ओली समुहको प्लान ग्रान्ड डिजाइन हो । हेर्दै जानुहोला प्रचण्ड माधव नेपालले जती सुकै प्रेसर दिए पनि ओली अहिले पार्टी फुटाउदैनन् न कुनै अध्यादेश ल्याउछन् । बरु अध्यक्ष छोड्छु भन्छन् । प्रधानमन्त्री चै रहिरहन्छन् । आउने स्थाइ समिती केन्द्रिय समिती बैठकहरुमा बरु धुरुधुरु रोएको नाटक गर्छन् । आत्मलोचना गर्छन् । तर मुल उद्देश्यप्रती बफादार रहन्छन । अहिले पार्टी फुटाउनु भनेको सक्किनु हो भन्ने उनले राम्रोसँग बुझेका छन । नयाँ चुनाव घोषणा गरुन्जेल जसरी पनि ओलीलाइ सत्तामा टिक्नु छ बस् ।
म एक आम नागरिक भएर त यत्ती कुरा बुझ्न गाह्रो छैन भने प्रचण्ड-माधव नेपालहरुले यि कुरा बुझेका छन कि छैनन् ? ओली भनेको एउटा कागजको बाघ मात्रै हो । तर झट्ट हेर्दा त बाघ भनेर मान्छे एक पटक त तर्सिइन्छ। तर नजिक गैसकेपछी त थाहा पाउनु पर्ने हो । पार्टीको यो हदको बदनामी हुँदा पनि किन पटक पटक ओलीलाइ मौका दिनु हुँदै छ ? ए बा बा ओलीलाइ यो पार्टी बनाउनु नै छैन बचाउनु नै छैन । जतिसक्यो बदनाम गर्नु छ । उनलाई त नेकपा एमाले ब्युंताउनु जो छ अर्को चुनाव नेकपा एमालेबाट लड्नु छ । यसका लागि मदन भण्डारी फाउण्डेसन् मार्फत एमाले ब्युंताउन पुर्व अभ्यास खुरुखुरु गरिराखेकै छन । तैपनी ओली सुध्रिने सप्रिने आसा गर्दै हुनुहुन्छ ? बरु कुकुरको पुच्छर सिधा होला ओली सुध्रिने प्रवृति होइन ! त्यो नेकपा भ्रस्ट भयो मलाई काम गर्नै दियनन् प्रचण्ड माधवहरुले- त्यही भएर मैले बिकास गर्न सकिन । त्यही भएर त्यो पार्टी छोडेर मैले नेकपा एमालेनै ब्युंताउनु परेको हो । अब नेकपा एमालेलाई भोट् दिनुस् म खतरा विकास् गरेर देखाउछु । यस्तै यस्तै हुन्छ ओलिको प्रचारबाजी अनी भोट् माग्ने तरिका अर्को चुनावमा हेरिराख्नु होला ! अनी तपाईंहरु के गर्नु हुन्छ ? धान खाने मुसो चोट थाप्ने भ्याकुत्तो नहोला अर्को चुनावमा ?
त्यसैले अब थप भ्रमबाट मुक्त हुन अतिआवश्यक भैसकेको छ । प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षिय केन्द्रिय सचिवालय देखी गाउँ कमिटी सम्म प्रस्ट हुन जरुरी छ । बहुमत बसेर भटाभट निर्णय लादेर नजाने हो भने सबै तिर बहुमत हुँदाहुँदै लास्टां हातलाग्यो शून्य हुन बेर छैन । पार्टीको बैठक बसेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनु पर्छ । सरकारको असफलता र भ्रस्टाचार अझ जनताले बुझ्ने गरी अंकडा सहित् बाहिर ल्याउनु पर्छ । बहुमतको निर्णय नमाने कारवाही गर्न सक्नु पर्छ । संसद बिघटन होला, संकटकाल लगाउला, पार्टी फोर्न अध्यादेश ल्याउला, जस्ता अनेक डर बोकेर बस्ने हो भने राजनीति नगरे हुन्छ । सन्यास लिदा हुन्छ । राधा कृष्ण मैनालीले भने जस्तै ओली डरपोक हुन । आउदिन मान्दिन भन्दा भन्दै पनि लुरुलुरु सचिवालय बैठकमा आउनु, लेख्दिन भनेको उत्तर लेखेर ल्याउनु अनेक ध्वाँस धम्की दिए पनि केही गर्न नसक्नुले ओली कागजी बाग मात्रै हो भन्ने सन्केत गरिसको पनि छ । धम्की ध्वाँस देखाएर हुने बेला सम्म देखाउने नहुँदा चिसै पानीले नूहाउने ओली प्रवृति हो। त्यसैले अब वार कि पार गर्ने गरी ठाउमै प्रहार गर्नु नै एक मात्र बिकल्प हो । ओलीले अब मिल्छु भनेर आत्मलोचना गर्छु अध्यक्ष छोड्छु भनेर फालेको जालमा फेरी पनि पर्ने हो भने आम सचेत जनसमुदाय अनी लाखौं कार्यकर्ताले धिक्कार्ने छन । ल मानौ ओलीले एमाले ब्युंताएनन भने पनि यो पराले अर्को चुनाव जितिन्छ ? गणतन्त्र संघियता संस्थागत हुन्छ ? हुँदैन । बरु आँट गरेर ओली प्रवृतिलाई बेलैमा साइड लगाइयो भने भोली अलिकती भए पनि भोट माग्न सजिलो हुन्छ । देशले अलिकती भए पनि शान्तिको सास फेर्न पाउँछ । जनताको बढ्दो निराशा पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ ।
अर्को कुरा ओली प्रवृति सँग आज लडे पनि भोली लडेपनि निर्मम तरिकाले लड्नु छदैछ । लड्नै छैन यसैगरी ल्याङ ल्याङ नै गरिराख्ने टाइम पास गर्ने हो भने त केही भन्नु छैन । लड्नेनै हो ठेगान लगाउने नै हो भने आज र अहिले नै उपयुक्त समय हो ।